September 24, 2008, 8:51 am Filed under: Wedding မိမိချစ်သူက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီးချိန် ၊ မိမိချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် ဆွေးနွေးပြီးချိန် အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမည့် ကိစ္စတွေထဲမှာ ဥပဒေအရ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိစ္စပြီးရင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြင်္သေ့ကျွန်းပေါ်မှာ မင်္ဂလာဝတ်စုံဆိုင်တွေက များပြားစွာ တည်ရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးကို လိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ။ မိမိနှစ်သက်သော ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးကို အဓိကထားချုပ်သော ဆိုင်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး သေချာကြည့်ရှုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ သတို့သမီးဝတ်စုံအများအပြားဟာ သူ့အလှနှင့်သူ အကုန်လှပတဲ့အတွက် မိမိနှင့်သင့်လျော်လိုက်ဖက်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သော ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သတို့သမီးဝတ်စုံရွေးချယ်ခြင်းဟာ သတို့သားဝတ်စုံရွေးချယ်ခြင်းထက် ပိုမိုအလုပ်များပြားစေတဲ့အတွက် အကြမ်းဖျင်းအနေနှင့် သတို့သမီးဝတ်စုံများကို လိုက်ကြည့်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးရဲ့ မိဘ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းမောင်နှမများဖြင့်သာ အတူသွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လုပ်မိတဲ့အမှားက ပထမဆုံး သွားကြည့်ချိန်မှာ မိမိချစ်သူကို အတူခေါ်သွားခြင်းပါပဲ .. ။ ၀တ်စုံများနှင့်ပတ်သတ် အတွေ့အကြုံမရှိသေးချိန်မှာ မိမိတစ်ယောက်တည်း အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ စုံတွဲအတူတူလာရင် ဆိုင်ထဲက ထွက်မရအောင် လုပ်လေ့ရှိသော မင်္ဂလာဝတ်စုံဆိုင်များ၏ ဖြားယောင်းမှုကို စိတ်ခိုင်မာစွာဖြင့် အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မရွေးချယ်ခင်မှာ ခေါင်းစားစိတ်မောရပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးချိန်မှာ ကြည်နူးကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရသော မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိစ္စများဖြင့် မင်္ဂလာမောင်နှံများ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေရှင် .. ။ Like this:Like Loading...
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲရမှာမို့ အချစ်၊ နားလည်မှု၊ ခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ခင်မင်တဲ့မိုးချိုသင်း
September 24, 2008 @ 10:19 pm Reply	🙂 Happy News! “Congratulations”!
Comment by ရွှန်းမီ
September 29, 2008 @ 11:39 am Reply	Busy preparing for wedding? Congrats and haveagreat life ahead!Alvin
Comment by Karaweik ကရဝိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha)
October 18, 2008 @ 12:27 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI